နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > သတ္တုကာစ်ဝန်ဆောင်မှု(2 များအတွက်စုစုပေါင်း သတ္တုကာစ်ဝန်ဆောင်မှု ထုတ်ကုန်များ)
သတ္တုကာစ်ဝန်ဆောင်မှု - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ သတ္တုကာစ်ဝန်ဆောင်မှု ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား သတ္တုကာစ်ဝန်ဆောင်မှု / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် သတ္တုကာစ်ဝန်ဆောင်မှု များထဲမှ Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. ။
tag ကို: သတ္တုကာစ်ဝန်ဆောင်မှု , Smart Watch Band , Apple က Smart Watch
အဆိုပါစမတ်လက်ပတ်နာရီဘောင်များအတွက် ချ. သေဆုံး, semi-အစိုင်အခဲသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း၏ solidification ကျုံ့လျှော့ချသည်, ထိုသတ္တုများပုံသွန်း၏တိကျမြင့်မားသည်, အသွင်အပြင်အရည်အသွေးကိုကောင်းလှ၏အဆိုပါ Semi-အစိုင်အခဲ,...
tag ကို: လူမီနီယမ်သတ္တုစပ်များကို Casting Die , ဖိအားလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်များကို Casting Die , အမြဲတမ်းမှိုကာစ်ဒီဇိုင်း
OEM စိတ်ကြိုက် Iphone, ရိုးရာကို PC, ကို ABS နှင့်အခြားပလပ်စတစ်ပစ္စည်းအိုးအိမ်, ဆင်းရဲသားကိုလက်ကိုင်, အနိမ့်ဆုံးကိုပစ္စည်း, ကန့်သတ်ဒီဇိုင်းညံ့ဖျင်းခြင်းအပူလွန်ကျူး, လျှပ်စစ်ပြည်တွင်းရေးအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အနိမ့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်...
OEM စိတ်ကြိုက် iPhone အတွက် Precision Frame က Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale သတ္တုကာစ်ဝန်ဆောင်မှု from China, Need to find cheap သတ္တုကာစ်ဝန်ဆောင်မှု as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on သတ္တုကာစ်ဝန်ဆောင်မှု produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our သတ္တုကာစ်ဝန်ဆောင်မှု, We'll reply you in fastest.